Ọ dị mkpa ka ndabere foto site na iPad. Nke ahụ bụ n'ihi na ndị a photos idekọ obi ụtọ na obi na ndụ gị. Na-ha anụ ahụ, ndabere bụ ezi nhọrọ. Photos-emekarị weghara nza nke nchekwa nke nwere ike ịmanye gị enweghị ohere nke ndị ọzọ faịlụ. Iji zere ya, ị pụrụ ndabere iPad foto PC, wee hichapụ ha si iPad. E nwere 3 ụzọ ime iPad foto ndabere. Na akụkụ n'okpuru, m ga-egosi gị otu otu.
Method 1. ndabere iPad Photo Library na igwefoto Roll ka Computer na TunesGo
Method 2. Ugwu iPad dị ka a eriri USB ndabere iPad weghaara Photos
Method 3. ndabere iPad Photos ka Mac na iPhoto
Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac) bụ ihe dị mfe na-eji iPad foto ndabere software. Ọ na-enyere gị aka ndabere niile ma ọ bụ họrọ foto na albums na iPad Igwefoto Roll, Photo Library gị na kọmputa. Mgbe ahụ, ị nwere ike ihichapụ iPad foto na batches.
The akụkụ n'okpuru na-elekwasị anya otú ndabere foto ndị si iPad na kọmputa nzọụkwụ site nzọụkwụ na gị Windows kọmputa. Ọ bụrụ na ị na-eji a Mac, na-aga site nzọụkwụ n'okpuru ma na-yiri nzọụkwụ na gị Mac.
Nzọụkwụ 1. Wụnye na ẹkedori iPad foto ndabere software na kọmputa gị. iTunes ga-arụnyere kwa. Jikọọ gị iPad na kọmputa site na eriri USB. Ozugbo ejikọrọ, gị iPad ga-ahụrụ ozugbo. Mgbe ahụ, gị iPad ga-emere ke akpan window.
Nzọụkwụ 2. Navigate-ekpe kọlụm na pịa Photos. Mgbe ahụ foto niile na-egosipụta na nri ebi ndụ. Ma ọ bụ, ị nwekwara ike pịa Igwefoto Roll, Photo Library ma ọ bụ ihe ọ bụla album n'okpuru Photo Atiya na-egosi foto. Họrọ foto na ị chọrọ na pịa Mbupụ na.
Olee otú ndabere iPad Photos
Ọ bụ a free ụzọ ndabere foto site na iPad ka PC. Ị adịghị mkpa iji wụnye ọ bụla atọ ọzọ ngwá ọrụ. Dị na-agụ akụkụ ma na-agbalị ya onwe gị.
• Your iPad na eriri USB
• gị na laptọọpụ ma ọ bụ onye Windows kọmputa
Soro Easy Nzọụkwụ:
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPad ka Windows PC site na iji eriri USB.
Nzọụkwụ 2. The Auto Play window ga-gbapụta. Họrọ Import foto na vidiyo site na iji kọmputa gị Windows Operating System. The PC ga-ahụ chọta gị niile foto na nchekwa ebe.
Nzọụkwụ 3. A obere mmapụta igbe ga-egosi, ị pụrụ nanị pịa Import.
Nzọụkwụ 4. kọmputa gị ga mgbe ahụ na-amalite na mbubata niile foto gị iPad. Ị nwekwara ike ịhọrọ ihichapu niile foto gị iPad mgbe na.
Nzọụkwụ 5. Ozugbo gị niile foto ma ọ bụ vidiyo e kwadoo, i nwere ike inyocha ha site achọpụta na gị Photo Gallery na kọmputa.
• Your Mac kọmputa
Nzọụkwụ 1. Hụ na gị iPad na jikọọ na gị Mac site na iji gị eriri USB.
Nzọụkwụ 2. Gbaa ndị iPhoto ngwa na gị Mac. Ọ bụrụ na ị ọma ahazi gị iPhoto na-agụ gị iPad n'elu ịkwụnye, mgbe ahụ, gị na ngwa ga ẹkedori-akpaghị aka.
Nzọụkwụ 3. All foto gị iPad ga-emere. Nanị pịa Import Họrọ ma ọ bụ mbubata Photos.
4 Ụzọ Hichapụ iPad Photos
2 Ụzọ Detuo Photos si iPhoto ka iPad
Olee otú Detuo iPhone Photos ka iPad
2 Ụzọ Nyefee iPod Photos ka iPad
7 égwu dezie Photos on iPad
Best 5 égwu nyefee Photo Nyefee
Best 5 Igwefoto ngwa ọdịnala n'ihi iPad
2 Ụzọ Ekekọrịta iPad Music
Copy faịlụ site iPad ka Samsung
3 Ụzọ nyefee Photos si iPad ka Mac
4 Ụzọ nyefee iPhone Igwefoto Roll ka Computer
Top 5 Sharepod Alternatives maka Mac na Windows
> Resource> iPad> 3 Ụzọ nkwado ndabere na mpaghara iPad Photos